Inona no toetra ananan’ny mpivady tsy sambatra? Bezzia
Maria Jose Roldan | 10/05/2022 22:12 | fifandraisana
Misy andiana soatoavina izay tsy azo ovaina amin'ny fifandraisana rehetra: fitiavana, fanajana na fahatokisana. Ireo soatoavina rehetra ireo dia hanampy ny mpivady ho sambatra sy haharitra rehefa mandeha ny fotoana. Mifanohitra amin'izany, ny tsy fahasambarana amin'ny fifandraisana dia noho ny fahasahiranan'ny mpivady eo amin'ny fiaraha-monina sy ny tsy fahampian'ny soatoavina sasany hita etsy ambony.
Indrisy anefa fa maro ny mpivady tsy faly ary tsy mankafy ny fatorana noforonina izy ireo. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia asehontsika anao ny toetra mampiavaka ny fifandraisana tsy mahasambatra sy ny tokony hatao mba hisorohana izany toe-javatra izany.
Toetran'ny fifandraisana tsy sambatra
Misy toetra maromaro manampy amin'ny famantarana ny fifandraisana tsy sambatra:
Fifandraisana izay avo loatra ny haavon'ny fitakian'ny roa tonta. Samy manantena ny tsirairay mba samy hanao araka ny fepetrany amin’ny fotoana rehetra, tsy misy fiheverana ny hevitry ny mpivady. Izany rehetra izany dia miteraka resabe sy fifandirana izay tsy mitondra soa ho an’ny hoavin’ny mpivady mihitsy.
Ny vokatry ny fitakiana dia ny fandeferana kely misy ao anatin'ny mpivady. Tsy azo atao ny fahadisoana sasany miteraka ady eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Ny fandeferana kely dia miteraka fanalam-baraka sy fanilikilihana ho isan'andro ary ny tsy fahasambarana dia napetraka tanteraka ao anatin'ny fifandraisana.
Ny fampiasana fanamelohana hanamarinana ny toetry ny saina dia zavatra mampiavaka ny ankamaroan'ny mpivady tsy sambatra. Ny mpiara-miasa dia tsy azo omena tsiny amin'ny fotoana rehetra noho ny fahasalaman'ny tenany manokana. Izany rehetra izany dia hitondra olana maro amin'ny fifandraisana sy fa lasa sarotra be ny fiarahana amin'ny lafiny rehetra.
Ny mpivady tsy sambatra dia tsy ekipa ary tsy afaka mamaha ny olana samihafa amin'ny fomba iombonana. Ao anatin’ny fiarahana mahafaly dia atao sy nomanina araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra, amin’ny fiheverana ny hevitry ny tsirairay. Ny roa tonta dia tsy maintsy mivoy amin'ny lalana mitovy ary mifanohana.
Ao anatin'ny fifandraisana tsy mahasambatra, ny antoko dia miady hevitra momba ny zava-drehetra ary mijery hoe iza amin'izy ireo no mety. Tsy azo avela izany na amin'ny toe-javatra inona na amin'ny toe-javatra inona na amin'ny toe-javatra inona na amin'ny toe-javatra inona ary tsara ny manambara ny olana resahina mba hahitana ny vahaolana tsara indrindra. Tsy ilaina ny tezitra na manomboka miady hevitra amin'ny namanao, satria vao mainka hiharatsy izany.
Raha fintinina, Tsy mora ny mampifaly ny mpivady sasany amin’ny fotoana rehetra. Ny fiarahana amin'ny namanao dia manasarotra ny zava-drehetra ary mety hipoitra tsy tapaka ny olana. Tsy mety ny mitazona fifandraisana tsy mahasambatra matetika satria zavatra tsy mahasoa ny andaniny sy ny ankilany. Ny fahasambarana dia zavatra tokony ho eo amin'ny mpivady rehetra heverina ho salama.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Inona no toetra ananan’ny mpivady tsy sambatra?
Sakafo be vy ho an'ny sakafon'ny zazakely